Xubnaha Golaha dhexe ee Xisbiga KULMIYE oo Xilkii ka qaaday Guddoomiye-ku-xigeenkii labaad, Masuulliyiin cusub oo lagu doortay iyo buuq gacan—ka-hadala oo madasha hadheeyay. | Berberanews.com
Home WARARKA Xubnaha Golaha dhexe ee Xisbiga KULMIYE oo Xilkii ka qaaday Guddoomiye-ku-xigeenkii labaad,...
Xubnaha Golaha dhexe ee Xisbiga KULMIYE oo Xilkii ka qaaday Guddoomiye-ku-xigeenkii labaad, Masuulliyiin cusub oo lagu doortay iyo buuq gacan—ka-hadala oo madasha hadheeyay.
Hargeysa-(Berberanews)-Shirkii Golaha Dhexe ee xisbiga KULMIYE oo muddo laba maalmooda ka socday magaalada Hargeysa, ayaa maanta xilkii lagaga tuuray Guddoomiye-ku-xigeenkii labaad ee Xisbigaas Cabdiraxmaan Cabdiqaadir. Ka dib markii ciidammada boolisku xoog kaga saareen hoolka shirka.
Guddoomiyaha Golaha dhexe ee Xisbiga KULMIYE Jaamaca Shabeel, ayaa golaha dhexe u akhriyay qoraal anshaxmarinna oo uu ku saxeexanyahay Guddoomiyaha Xisbigaas Muuse Biixi Cabdi oo nuxurkeedu ahaa inuu aflagaadeeyay Madaxweynaha Somaliland, meelna kaga dhacay xeerka Xisbiga sidaas daraadeedna loo qaado codka xil-ka-qaadista iyo xubinnimmadda.
Qoraalkaasi waxa uu qornaa sidan; “Mudaneyaal, markaan la tashaday Gudidda fulinta xisbiga KULMIYE waxaan sharaf iyo qadarin mudan idiinku soo gudbinayaa anshax-marin ka dhan ah Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Guddoomiye-ku-xigeenka labaad. Md. Cabdiraxmaan Cabdiqaadir wuxuu dhawr jeer shirar jaraa’id oo uu si toos ah uga horyimid dastuurka iyo Barnaamijka xisbiga.
Cabdiraxmaan wuxuu si aan gabasho lahayn u cadeeyay inuu ka soo horjeedo barnaamijka xukuumadda iyo xisbiga KULMIYE ku shaqeynayay kaasi oo ah barnaamijkii iyo dastuurkii lagu ansixiyay shirweynihii labaad ee 2008-dii.
Mudaneyaal, Gudidda fulinta ee xisbigu dhawr jeer ayay waano iyo digniino u jeedisay C/Raxmaan Cabdiqaadir. Haseyeeshee Mudanuhu wuu ku sii adkaystay sharci jabintii.
Waxaan u soo jeedinayaa Golaha dhexe ee xisbiga KULMIYE inuu Goluhu ku anshax mariyo qodobka 56-aad ee dastuurka qaranka ee anshax-marinta loo cuskado. Maadaama oo uu si toos ah uga horyimid dastuurkii iyo Barnaamijkii xisbiga.”
Kadib qoraalkaasi waxa madashu isku rogtay buuq iyo qaylo, kadib markii masuulka xilka laga qaaday dalbaday in hadal la siiyo oo uu doodiisa dhiibto, hase ahaatee waxa ka diiday Guddoomiyaha shirguddoonka Jaamac Shabeel, waxaanna markiiba loo dalbaday ciidan boolis ah oo gudaha hoolka lagu sii diyaariyey, kuwaas oo xoog kaga saaray shirka.
Intaa kadib waxa ergooyinka shirka loo bandhigay inay go’aan ka gaadhaan qoraalkaasi anshax-marinta ah, waxaanna codkii loo qaaday oggolaaday 155 in xilka iyo xubinimadaba laga qaado Cabdiraxmaan Cabdiqaadir, waxa diiday 24 xubnood, waxaanna ka aamusay 16 xubnood, Guddoomiyuhuna muu codayn.
Dhinaca kale, waxa shirkaasi lagu doortay xubno hoggaanka sare ka mid ah oo ay ka mid yihiin Guddoomiye-ku-xigeenka kowaad oo loo doortay Maxamed Kaahin Axmed oo hore u ahaa afhayeenka xisbiga, Guddoomiye-ku-xigeenka labaadna loo doortay Maxamed Xaaji Yuusuf (Waabeeye) oo ah xildhibaan ka tirsan Golaha Wakiillada, halka Xoghayaha Guud loo ansixiyey Xasan Siciid Yuusuf oo hore ku-sime u ahaa.
Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland Md. C/Raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) ayaa maanta soo gabo-gabeeyay shirweynihii sadexaad ee Golaha dhexe ee xisbiga KULMIYE oo labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socday Huteelka Maansoor ee magaaladda Hargeysa.
Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland Md. C/Raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo xidhitaankii shirweynihii sadexaad ee golaha dhexe ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay sida uu ku qabsoomay shiweynihii Golaha dhexe, waxaanu u mahad celiyay Hoggaanka iyo Guddoonka Golaha dhexe ee soo agaasimay shirweynahaas.
“Waxaan ugu horayn u mahad celinayaa ergadda Golaha dhexe ee ka kala yimid goboladda dalka oo aan ku hambalyeynayo siday uga soo qeyb-galeen shirweynaha sadexaad ee Golaha dhexe, waxa kaliya oo aan leeyahay haddii aynu nahay xisbiga KULMIYE waxa ILAAHAY mahaddii ah inaynu talladdii dalka hayno oo aynu noqono muunaddii dimuqraadiyadda. Waxaana aynu nahay xisbiga kaliya ee ugu nidaamka wanaagsan axsaabta siyaasadda,”ayuu yidhi Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland.
Md. C/Raxmaan Saylici oo la hadlayay taageereyaashii KULMIYE wuxuu yidhi “Waxaan leeyahay shacbiga iyo taageereyaashii KULMIYE xiligii aynu la wareegnay talladda dalka waxa laga joogaa sanad iyo dheeraad. Waxaan leeyahay haddii aanu idinka yara fogaanay qoladayadii aad doorateen neceyb ilowshiiyo midna ma jiro ee masuuliyaddii dalka oo dhan ayaa dusha naga fuushay waxaana aanu jecel nahay inaad taas nala dareentaan. Marnaba idin maanu ilaawin dadkana waad nooga calaamadsan tihiin.”
“Waxaanu ku mashquulsan nahay dantii guud iyo horumarintii dalka iyo sidii aynu wadankeena horumar dhinacyo badan leh u gaadhsiin lahayn. Waxaanu idiin balan qaadaynaa inaanu ka dhabayno himiladdii aad lahaydeen oo aad noo doorateen oo ay ka mid ahayd inaynu dhaqaalaha wax ka qabano, inaynu dimuqraadiyadda kobcino iyo inaynu ictiraafkii aynu gaadhno,”ayuu yidhi Madaxweyne Ku xigeenku.
Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland Md. C/Raxmaan Saylici wuxuu ugu baaqay taageereyaasha xisbiga KULMIYE inay midoobaan oo ay gacan siiyaan xisbigoodda.
Sidoo kale, Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay gabo-gabaddii shirweynaha golaha dhexe ayaa u mahad celiyay ergadii Golaha dhexe, waxaanu tilmaamay inuu xisbigoodu qabyo-tirtay hawlihiisii gaar ahaan shuruucda iyo buuxinta xubnihii ka banaanaa Golaha dhexe iyo Hoggaanka xisbiga.
“Walaalayaal, shirkeenan maanta waan arkayaa inuu aad iyo aad u shaqeeyay oo aynu saacado badan fadhinay oo aynu daalan nahay. Marka horese waxaan u mahad naqayaa shir-gudoonkii shirkan inoo daadihinayay oo hawl-badan inoo soo qabtay iyo xubnaha Golaha dhexe. Maanta KULMIYE wuxuu ka gudbay marxaladii labaad oo ah inuu hawlihiisa xeerarkiisa hagaajisto, inuu madaxdiisa kala bedelo. Walaalayaal waxa inoo balan ah inaynu daadkeena ugu adeegno sidii aynu ugu balan qaadnay,”ayuu yidhi Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE.
Guddoomiyaha oo ka hadlayay marxaladda uu xiligan waajahayo xisbigiisu wuxuu yidhi “Waxaynu maanta taagan nahay doorashadii dawladaha Hoose oo ay u tartamayaan Xisbiyo iyo ururo. KULMIYE wuxuu kaga duwan yahay xisbiyadda iyo ururadda tartamya isagu maanta wuxuu taagan yahay hawshii dadweynoow aad ii dirteen intaasna waan qabtay intaasina way uu hadhay. Xisbiga KULMIYE ma aha imika mid dadka malo-awaal iyo waxaas ayaan qaban doonaa dadka ugu balan qaadaya. Waxa taalla wixii uu qabtay iyo hawsha uu ku dhex jiro. Sidaas darteed, waxa Hoggaanka xisbiga KULMIYE, xukuumadda iyo dhammaan taageereyaashiisa waxa la gudboon dedaal dheeraad ah oo aynu ugu hawl-galo sidii aynu u qancin lahayn taageereyaasheena. Inagoo muujinayna dedaal iyo hawl-karnimo sidii aynu horeba u balan qaadnay. Waxaan ku soo gabo-gabaynayaa Xisbiga KULMIYE ha guulaysto.”
Previous articleDIMUQRADIYADII XISBIGA KULMIYE KU FAANI JIRAY OO MAANTA KU FASHILMAY HABKA LOO MAAMULAY XILKA QAADISTII G.XIGEENKA KOOWAAD EE XISBIGA KULMIYE MA KU SAXSANYAHAY
Next articleDavid Luiz Oo Shaki Ku Jiro Inuu Ciyaari Karo Semi-finalka Champions League.